Mmemme | January 2020
Ịmepụta windo ngwa ngwa na Butler (Boutler)
Ụnyaahụ, m na-asụ ngọngọ na usoro mmemme maka ịmepụta multi-akpụkpọ ụkwụ windo flash Butler, nke m na-anụtụbeghị ihe ọbụla. M ibudatara ọhụrụ version 2.4 ma kpebie ịnwale ihe ọ bụ ma dee banyere ya. Usoro ihe omume ahụ ga-enwe ike ịmepụta ngwa ngwa flash USB multiboot site na setịpụrụ nke ihe ọ bụla ISO - Windows, Linux, LiveCD na ndị ọzọ.
Ebe ibudata lame_enc.dll iji zoputa mp3
Ọ bụrụ na ịchọrọ lame_enc.dll maka Audacity 2.0.5 ma ọ bụ nsụgharị ọzọ, n'okpuru ebe a bụ ụzọ abụọ ị ga-esi budata koodu kọntaktị ahụ maka n'efu: dịka akụkụ nke koodu codec na faịlụ dị iche, sokwa nkọwa nke nhazi ya. Nchịkọta lame_enc.dll n'onwe ya abụghị codec (ya bụ, onye na-edenye koodu nchekwa), ma ọ bụ naanị akụkụ nke na-edegharị ọdịyo na MP3, ebe ọ na-anọghị na koodu codec niile, bụ nke e mere iji nye nanị nzaghachi nke ọtụtụ ụdị N'ihi nke a, Audacity na mmemme ndị ọzọ na-agụnye koodu codec nke ha nwere ike ịchọ faịlụ folda_enc.
Esi lelee ndị ana-akpọ na Skype ma chekwaa ndepụta nke kọntaktsị
Ọ bụrụ na ịchọrọ ile ndị mmekọ gị na Skype, chekwaa ha na faịlụ dị iche ma ọ bụ nyefee na akaụntụ Skype ọzọ (o nwere ike ị gaghị enwe ike ịbanye na Skype), usoro SkypeContactsView free bara uru. Gịnị kpatara nke a ji dị mkpa? Dịka ọmụmaatụ, ọ bụghị ogologo oge gara aga, n'ihi ihe ụfọdụ, ejiri m Skype gbochie, ogologo oge ederede na nkwado ndị ahịa enyereghị m aka na m ga-amalite akaụntụ ọhụrụ, na-achọkwa ụzọ iji weghachite kọntaktị ma nyefe ha.
Esi eweputa PDF na Okwu (DOC na DOCX)
N'isiokwu a, anyị ga-ele anya ọtụtụ ụzọ ozugbo iji tọghata PDF ederede n'ime usoro Okwu maka ntụgharị ederede. Enwere ike ime nke a n'ọtụtụ ụzọ: iji ọrụ ntanetị maka ịgbanakọta ma ọ bụ mmemme ezubere maka nke a. Na mgbakwunye, ọ bụrụ na ị na-eji Office 2013 (ma ọ bụ Office 365 Home Extended), mgbe ahụ, arụ ọrụ nke ịmepe faịlụ PDF maka edozi ejirila ndabara.
Esi mee ngwa ngwa ka ụdaolu maka iPhone ma ọ bụ gam akporo
N'ikpeazụ, ịnwere ike ịme ụdaolu maka iPhones ma ọ bụ smartphones na gam akporo na ọtụtụ ụzọ dị iche iche (na ha niile adịghị mgbagwoju anya): iji software n'efu ma ọ bụ ọrụ ntanetị. Ị nwere ike, n'eziokwu, site n'enyemaka nke ngwanrọ ọkachamara maka ịrụ ọrụ na ụda. Isiokwu a ga-agwa ma gosipụta otú usoro nke ịmepụta ụdaolu na programma AVGO Free Rington Maker.
Onye nlekota 5 dị maka nbudata.
Ọtụtụ ndị maara nke ọma na ngwanrọ n'efu maka ihichapu kọmputa CCleaner na ugbu a, a tọhapụrụ ya ọhụrụ - CCleaner 5. Tupu oge mbụ, mbipụta beta nke ngwaahịa ọhụrụ ahụ dị na ebe nrụọrụ weebụ gọọmenti, ugbu a bụ nke a ga-ahapụ ndị nchịkwa ikpeazụ. Ihe kachasị mkpa na usoro nke usoro ihe a agbanwebeghị, ọ ga-enye aka iji dobe kọmputa ahụ dị mfe site na faịlụ nwa oge, ebuli usoro ahụ, wepu mmemme site na mmalite, ma ọ bụ kpochapụ ndekọ Windows.
Sardu - mmemme dị ike nke ịmepụta multiboot flash drive ma ọ bụ diski
Edere m banyere ụzọ abụọ iji mepụta multiboot flash drive site n'ịgbakwunye ya ihe ọ bụla ISO, nke atọ nke na-arụ ọrụ dị iche - WinSetupFromUSB. N'oge a, achọpụtara m Sardu, ihe omume maka otu nzube ahụ nke nwere onwe maka iji onwe ya, ọ pụkwara ịdị mfe ka onye were karịa Easy2Boot.
Nwelite na Microsoft Office 2016
Ụnyaahụ, mbipụta Russian nke Office 2016 maka Windows tọhapụrụ na, ọ bụrụ na ị bụ onye na-edebanye aha 365 (ma ọ bụ chọọ ikiri mbipụta ikpe n'efu), ị nwere ohere iji nweta nkwalite ọhụrụ ahụ ugbu a. Ndị ọrụ Mac os X nwere ụdị ndenye yiri nke ahụ nwekwara ike ime nke a (maka ha, mbipụta ọhụrụ ahụ pụtara na mbụ).
New Office 365 Ntinye aka na Ụlọ
N'oge gara aga, edere m akwụkwọ abụọ banyere Office 2013 na 365 maka ụlọ, na isiokwu a, m ga-achikota ihe ọmụma niile maka ndị na-amaghị ihe dị iche n'etiti nhọrọ abụọ ahụ, na-ekwukwa banyere ọnọdụ ọhụrụ na nke dị mfe nke e mere na ndenye aha Office 365: Ozi a ga - enyere gị aka ịnweta ụlọ ọrụ Office 365 nyere ikikere n'efu.
Esi lelee USB flash drive ma ọ bụ ISO
Ihe karịrị otu ugboro, edere m akwụkwọ ntụziaka banyere otu esi emepụta bọmbụ, ma n'oge a, m ga - egosi gị ụzọ dị mfe iji lelee USB flash drive ma ọ bụ ihe oyiyi ISO na-enweghị booting ya, na-enweghị na-agbanwe agbanwe BIOS ma ọ bụ ịmepụta igwe arụmọrụ. Ụfọdụ ihe eji eme ihe maka ịmepụta ngwa USB flash nwere ike ịgụnye ngwaọrụ maka nkwenye nke ụlọnga USB dị na ya, na, dịka iwu, na-adabere na QEMU.
Kọmputa desktọọpụ Windows ọtụtụ site na iji BetterDesktopTool
Ruo ogologo oge, akọwawo m ụfọdụ mmemme iji jiri kọmpụta ọtụtụ na Windows. Ugbu a, achọtawo m ihe ọhụrụ maka onwe m - usoro free (nke dịkwa ụgwọ a kwụrụ ụgwọ) BetterDesktopTool, nke, dị ka ndị a si nkọwa na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị, na-arụ ọrụ nke Spaces na Mission Control site na Mac os X na Windows.
N'ezie, ọ dịghị ihe dị mfe karịa ịmepụta Acronis True Image flash drive, Disk Director (ma ị nwere ike ịnwe ma ụgbọala ahụ, ọ bụrụ na ị nwere ma ihe omume na kọmputa), ihe niile dị mkpa maka nke a bụ maka ngwaahịa ha. Ihe omuma a ga egosiputa otu esi eme ngwa acronis USB flash (ot'odi, i nwere ike meputa otu ISO site na iji otu uzo wee rechapu ya na diski) nke bu ezi Image 2014 na Disk Director 11 components.
Obere kaadị vidiyo - esi chọpụta, mmemme, ụkpụrụ nkịtị
N'isiokwu a, anyị ga-ekwurịta banyere ọnọdụ okpomọkụ nke kaadị vidiyo, ya bụ, site n'enyemaka nke mmemme ndị a nwere ike ịchọta ya, olee ụkpụrụ arụmọrụ nkịtị na ntakịrị aka na ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na okpomọkụ dị elu karịa nchekwa. Ihe omume niile a kọwara na nke ọma na Windows 10, 8 na Windows 7. Ihe ọmụma dị n'okpuru ebe a ga-aba uru ma ndị nwe NVIDIA GeForce kaadị vidiyo na ndị nwere ATI / AMD GPU.
Ọtụtụ, ọtụtụ ndị na-eji Skype ekwurịta okwu. Ọ bụrụ na ịnwụbeghị, jide n'aka na ịmalite; ihe niile dị mkpa maka ndebanye na ntinye nke Skype dị na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị na na ibe m. I nwekwara ike inwe mmasị na: Otu esi eji skype na-enweghị ike ịwụnye ya na kọmpụta gị.
Ihe ngwanyere ederede
Dị ka a na-achị, mgbe ọ na-abịakwute mmemme maka mmata nke ederede ederede (OCR, njirimara ngosi njirimara), ọtụtụ ndị na-echetara naanị ngwaahịa - ABBYY FineReader, nke doro anya na onye isi n'etiti ndị dị otú ahụ na Russia na otu n'ime ndị isi n'ụwa.
Nchịkọta foto ntaneti na mmetụta Instagram - Mmecha zuru oke
Dị ka akụkụ nke nkọwa nke usoro dị mfe na nke free iji "mee ka foto mara mma", m ga-akọwa nke na-esote - Ọcha zuru oke 8, nke ga-eji dochie Instagram na kọmputa gị (n'akụkụ ọ bụla, nke na-enye gị ohere itinye mmetụta na foto). Ọtụtụ ndị ọrụ nkịtị adịghị mkpa onye nchịkọta akụkọ na-agba ọsọ na mgbatị, ọkwa, nkwado maka ọkwa na ngwakọta algorithm (ọ bụ ezie na nke ọ bụla nwere Photoshop), ya mere, iji ngwá ọrụ dị mfe ma ọ bụ ụfọdụ ụdị foto online nwere ike ịba uru.
Mobogenie - gini bu usoro a
Abụọ ndị ọrụ nchịkọta abụọ: akụkụ ahụ na-achọ ebe ị ga-ebudata mobogenie na Russian, onye nke ọzọ chọrọ ịma ihe mmemme ọ bụ nke pụtara n'onwe ya na otu esi wepu ya na kọmputa. N'isiokwu a, m ga-aza ajụjụ abụọ: na nke mbụ, ihe Mobogenie maka Windows na gam akporo na ebe ị nwere ike ịnweta usoro a, na nkebi nke abụọ, otu esi ewepụ Mobogenie na kọmputa gị, na ebe o si bịa ma ọ bụrụ na ị wụnyeghị ya.
Disk Analyzer - ngwá ọrụ ọhụrụ na Graleaner 5.0.1
Na nso nso a, edere m banyere CCleaner 5 - mbipụta ohuru nke otu n'ime usoro mmemme kachasị mma nke kọmputa. N'eziokwu, enweghi ihe ọhụrụ n'ime ya: interface dị nfe nke dị ugbu a na ikike iji jikwaa plugins na ndapụta na ihe nchọgharị. Na update update CCleaner 5.0.1, ngwá ọrụ gosipụtara na ọ bụghị n'ebe ahụ - Disk Analyzer, nke ị nwere ike nyochaa ọdịnaya nke draịvụ ike mpaghara na mpempe akwụkwọ mpụga ma kpochapụ ha ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Njikwa ntanetị nke kọmputa site na TeamViewer
Tupu mmemme nke mmemme maka ịnweta ntanetị na desktọọpụ na njikwa kọmputa (yana netwọk na-ekwe ka a mee ya n'oge a na-anakwere), na-enyere ndị enyi na ezinụlọ aka idozi nsogbu na kọmputa na-ejikarị oge awa mkparịta ụka ekwentị na-agbalị ịkọwa ihe ma ọ bụ ịchọpụta na ka na-aga n'ihu na kọmputa ahụ.
Jiri akwụkwọ PDF rụọ ọrụ na PDF Shaper
Ma eleghị anya ọ bụghị mgbe ahụ, ma ndị ọrụ ga-arụ ọrụ na akwụkwọ na PDF, ma ọ bụghị naanị na-agụ ma ọ bụ gbanwee ha na Okwu, ma wepụ ihe oyiyi, wepụ ibe ọ bụla, debe paswọọdụ ma ọ bụ wepu ya. Edere m ọtụtụ isiokwu na isiokwu a, dịka ọmụmaatụ, gbasara ndị na-agbanwegharị PDF online.
https://termotools.com ig.termotools.com © Mmemme 2020